ဘယ်ကနေစပြီး ရုန်းထွက်ကြမလဲ?… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ဘယ်ကနေစပြီး ရုန်းထွက်ကြမလဲ?…
- me dain
Posted by me dain on Oct 10, 2012 in Think Tank | 19 comments
ကျွန်တော့် အမြင်ကိုဒီကနေ တဆင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြပါရစေ…
ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်တဲ့လူရှိသလို…ပြောင်းလဲချင်တဲ့ လူတွေလည်းရှိကြမှာပါ…
အထူးသဖြင့် ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံဟာ..ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့တက်လှမ်းခါစ အချိန်အခါမျိုးမှာ
အကြပ်အတည်း ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိကြမှာပါ…ဒီအကြပ်အတည်းကနေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုတာ
သူများကတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ဘာသာရေးကို စပြီးပြောင်းလဲ သင့်တယ်လို့မြင်ပါ
မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်က အနောက်တိုင်းပညာတွေကို တချို့ဘုန်းကြီးတွေက
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပညာ တွေလို့ပြောတာ ကြာဖူးတယ်…ပြည်တော်သာစီမံကိန်းမှာ ကျောင်းတွေပေးတော့
တချို့ဘုန်းကြီးတွေက သဘောမကျဘူး….ပွဲကျောင်းဘုန်းကြီးတွေကတော့ ခေတ်အမြင်ရှိ
မပြောင်းလဲချင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ကမ္ဘာကြီးလုံးတာကို တော်တော်ကြောက်ပုံပေါ်တယ်…
ဘုန်းကြီးတွေဟာ ယေဘုံယျ အားဖြင့် အမျိုးသားကျောင်းကို ဆန့်ကျင်တာများတယ်…
ပညာရှင်တွေကတော့…ကမ္ဘာကြီးလုံးတာ မကြိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကိုလည်း “မတိုက်ခိုက်”.ဘူး..
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကနေလည်း…” လျှော့ပြီးတော့ မလုပ်ဘူး” ပုံမှန်ဘဲချီတက်
ယနေ့မြန်မာပြည်ကတော့ဗျား…ကိုယ့်ကသာ လက်မခံဘူး၊ မကြိုက်ဘူးလို့ တင်းခံနေကြတာ
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ အသုံးအဆောင်ကတော့ အလျှံပယ်ဘဲ… လူတွေထက် တောင်ပိုခေတ်မှီနေသေး
ပြောချင်တာ…နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကနေရုန်းထွက် နိုင်အောင်ကြိုးစားကြသလို…
ဘာသာရေး အနှောင်အဖွဲ့၊ ဘောင်ခတ်ထားမှုအနှောင်အဖွဲ့တွေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်အောင်
.နိုင်ငံရေးဟာ အများနဲ့ပူးပေါင်းပြီး မူစည်းကမ်းဘောင် အတွင်းမှာလုပ်ရတော့ နည်းနည်းခက်ချင်
ခက်မယ်…ယုံကြည်ချက်ကျတော့ မိမိဖာသာ မိမိလွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး…အကျိုးလည်းရှိ အများလည်း
မထိခိုက်ရင် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်တွေးတောခွင့် ရှိပါတယ်….ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ တရားဟာ ကျင့်သုံးတဲ့
လူတွေနဲ့ဘဲဆိုင်တယ်..ကျင့်သုံးတဲ့လူတွေရှိနေသေး သရွှေ့…သာသာနာ နှစ်
.ကျောက်တောင်လက္ခဏာ…ပမာအလား သူများဖက်ကိုလည်း လားလားမှ…မယိင်းယိုင်ဘူး…
ဒါကြောင့် ကျယ်ပြန်တဲ့ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှု၊ လူအများရဲ့လွတ်လပ်ကို လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာထက် ကိုယ့်အိမ်ကို
နောက်ဆုံး ကိုယ့်နိုင်ငံက အပြည့်အ၀ ဒီမိုကရေစီမရသေးတာရင်တောင်မှ ကိုယ့်အိမ်က
ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်ရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား..
လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်စီမံအုပ်ချုပ်ရင်ကော မရဘူးလား?…
ယ္ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျား…အိမ်မှာ ကတော့..ငါ့သားဒါမလုပ်နဲ့…ငါ့သမီး ဒါမလုပ်နဲ့
အဖေမကြိုက်ဘူး…မကြိုက်ဘူး ..မကြိုက်ဘူး ဆိုတာနဲ့ဘဲ..ဒီလိုဘဲ မပြောရဲ မဆိုရဲ.
.မမေးမမြန်းရဲတော့ဘဲ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို..အူတူတူ အတတဖြစ်အောင် နေခိုင်းကြတော့မလား?…
ဘာသာရေး အတော်များများဟာ ကျွန်တော်တို့ကို
.နှောင်ဘ၀ အထိချုပ်နှောင်ထားတာ တွေ့ရတယ်…နောင်ဘ၀ဆိုတာ လက်မခံရင်ဘဲ…ဘာသာရေးဆို
နောင်ဘ၀ဆိုတာလက်ခံလိုက်လို့ ဘာများဖြစ်မှာ မို့လို့လည်း…လွယ်လွယ်နဲ့မတွေး လိုက်ပါနဲ့..
ဒါကြောင့်…ဒီမိုကရေစီရချင်ရင်…လူတစ်ဦးချင်းကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ …ဒီဘာသာရေး
လွတ်လပ်မှု၊ မိမိ၏ အခွင့်အရေး အစစ်အမှန်၊ တန်ဖိုး
အစစ်အမှန် စသည်ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ကို ခံစားရရှိနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်….
About me dain
me dain has written5post in this Website..
View all posts by me dain →
အသစ်ကိုလိုချင်ပြီ ဆိုရင် အဟောင်းကို စွန့် ရမှာပေါ့ဗျာ
ဦးပေ စွတ်မပြောနဲ့ဗျ။အဲလူ ဘာရေးထားလဲ ဘာဆိုလိုတာလဲသေသေချာချာဖတ်ကြည့်ပါဦး။
အချင်းချင်းမို့ မှားပြောမိတာ လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဆိုလိုရင်းကို သေသေချာချာဖတ်ကြည့်
ပါဦးခင်ဗျာ။မျက်မှန်စိန်းတပ်တာ အဲကောင်တွေက စစလုပ်နေတာချည်းပါပဲ။
me dain ရေ ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ပေတော့
ကျွန်တော်တို့လဲ တွေးမယ်ဆိုရင် မိုးလင်းကမိုးချုပ်ထိုင်တွေးလို့ရတာပဲ
ဒါပေမယ့် ရှေ့မှာလမ်းဖောက်သွားတဲ့သူရှိရင် အဲဒီလမ်းကောင်းရင် လိုက်လျှောက်ရမှာပဲ
ဟိုလိုပြောင်းပါ ဒီလိုပြောင်းပါ ထိုင်ပြောနေရင်တော့
ဘယ်သူမှ ပြောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲပြောင်းနေလို့မရဘူး။ အားလုံးပြောင်းမှ ပြောင်းလဲတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ဘယ်သူကိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတာထက် ငါ ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အဟိ မိုက်တယ်ဗျ ပို့စ်က။ ဒါပေမယ့်လောကမှာဥာဏ်မမှီတဲ့သူတွေ မပြောင်းလဲရဲတဲ့သူတွေ အိုမင်းသွားတဲ့သူတွေတော့ရှိမှာဘဲလေ။ ဒါကြောင့် စိတ်လေးတော့ရှော့ထားဗျို့။
me dain says:
How much ဆိုတာများလွန်းတယ်….How can ဆိုတဲ့ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့
နည်းနည်းဖြစ်မလားဘဲ…ဒါကြောင့်….မိသားစုတွင်း ဒီမိုကရေစီကို ဥပမာပေးပြီး ကိုယ့်အမြင်ကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း တင်ပြကြည့်တာပါ…..ဒီပိုစ့်ကြောင့် ဘာသာရေး
လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပေမဲ့…လွတ်လပ်စွာနေခွင့် မရသေးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ…တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်စေချင်လွန်းလို့…ကိုယ်အားမရတာကိုကြည့်ပြီး ရင့်ဖွင့်မိတာပါ..အခုလိုအားပေးကြတာကိုဘဲ..ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ…
ယနေ့မြန်မာတွေ လိုချင်နေတာက လူတစ်ဦးချင်း လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီ။
ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အသိမှာ ငယ်မှတ်အနေနဲ့က ဒါတွေပဲယုံ၊ ကျန်တာတွေအလကားပဲဆိုပြီး အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဇာတ်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဦးနေ၀င်လက်ထက်ဖွား မြန်မာထေရ၀ါဒီအစွန်းရောက်လမ်းစဉ်။
ဒီ အာဏာရှင်ဘာသာရေးအကျင့်တွေနဲ့ သွားချင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊
ဗုဒ္ဓက လူ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလေးထား လမ်းညွှန်ခဲ့တယ်။ ဝေဖန်ခွင့်၊ စိစစ်ခွင့်တွေ ပေးခဲ့တယ်။
ဦးနေ၀င်လက်ထက်ဖွား မြန်မာထေရ၀ါဒီအစွန်းရောက်တွေက သူတို့အသိ၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မတူတဲ့တရားဆိုရင် ပြဿနာရှာ ရန်လုပ်၊
ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း၊ လူ့အသိ (ဦးနှောက်)ကိုပါ မပြောင်းနိုင်ရင်တော့
နောက်ပြန်မလှည့်ချင်တဲ့ သူတွေ နောက်ပြန်လှည့်ကြရဦးမှာပါပဲ။
သွားချင်တာက ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အကျင့်တွေက အာဏာရှင်နောက်လိုက်စိတ်၊
ဘာပြောပြောယုံ၊ တို့ဆရာ ပြောတာနဲ့ မတူရင် တို့ရန်သူဆိုတဲ့ ပဒေသရာဇ်ခေတ်လက်ကျန်စိတ်။
တိုက်ပုံအင်္ကျီနဲ့ ဘောင်ဘီလို ကို့ရို့ကားယာပါလားလို့ ဆက်တွေးမိပါတယ်။
(မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်က အနောက်တိုင်းပညာတွေကို တချို့ဘုန်းကြီးတွေက
ပညာရှင်တွေကတော့…ကမ္ဘာကြီးလုံးတာ မကြိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကိုလည်း “မတိုက်ခိုက်”.ဘူး..)
အဲဒီဆိုလိုချက်ကိုမင်းပြန်ဖြေရှင်းနှိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါ။ဘုရားမဖြေခဲ့တဲ့ အချက်တွေတောင်အကုန်မသိပဲအရှက်မရှိလာမပြောပါနဲ့။တစ်ခုတော့ပြောလိုက်ပါမယ် အမျိုးသားကျောင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပဲစတင်ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ထပ်ပြောရရင် မင်းပြောတဲ့(ကမ္ဘာကြီးလုံးတာကို တော်တော်ကြောက်ပုံပေါ်တယ်…)အဲဒါက ဘယ်ကျမ်းစာမှာပါတာလဲ
လေ့လာပါ။ဘယ်ကောင်တွေကြောက်နေတာလဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောပါ။အရင်ဆုံးမင်းပြောရမှာက မင်းဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်လဲဖြေပါ။ဆက်ရှင်းချင်ပါတယ်………..စိတ်မရှိပါနဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ မင်းတို့ကို
ကျွန်တော်ဟာ ဘာသာ အားလုံးကိုလေ့လာသူတစ်ယောက်ပါ…အထူးသဖြင့် ဗုဒ(Buddha) အဆုံးအမ တချို့ကိုသဘောကျတယ်…ဘာဖြစ်လို့ တချို့တ၀က်ဘဲ သဘောကျလည်းဆိုတော့….တချို့စကားတွေဟာ
ဟိုနေရာမှာတစ်မျိုး ဒီနေရာမှာ တဖုံ…တစ်ထပ်တည်းမကျဘူးဖြစ်နေတာကို…သံသယရှိလိုဘဲ…ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က မိဘရိုးရာကပြောတဲ့စကားတွေကို… တချို့တ၀က်ဘဲ လက်ခံနိုင်သေးတယ်…
ကျွန်တော်ဟာ ဗုဒ(Buddha) ဘုရားမြင်ပြသွားတဲ့လောကအမြင်နောက်ကို…လိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ… ဘာသာဝင်လို့ပြောရင်.. .ဘောင်ကျည်းတယ်…. အားလုံးကိုလေ့လာသူလို့ပြောပါရစေ… ဘာဘဲလေ့လာ လေ့လာ
.အောက်ပါအချက်(၃)ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး.ကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်…. ပထမ..Observation=လေ့လာသုံးသပ်မယ်… ဒုတိယကတော့..Thought= စဉ်းစားတွေးတောမယ်..ပြီးရင်အဲဒီအတိုင်းAction= လုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ပေါ့…
ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြည့်လို တစ်ထပ်တည်း မကျဘူးဆိုရင် (၀ိဘစ်ဇ၀ါဒ အရ.ကာလာမသုတ်မှာ ဘုရားဟောတာနဲ့ အညီ … လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်လေ့လာမယ်… ဒါကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပါ….
အမျိုးသားကျောင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပဲစတင်ပေါက်ဖွားလာတာပါ… ဆိုတာလက်ခံပါတယ်…အဲဒီ အမျိုးသားကျောင်းကိုလက်ခံတဲ့…ဘုန်းကြီးတွေဟာ ခေတ်အ မြင်ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ လို့ပြောရမှာပါ… ဘုန်းကြီးအာလုံးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပိုစ့်မှာသေချာ လေ့လာကြည့်ပါ… အခုလည်းမြန်မာပြည်မှာ…ဆွေးမြေ့ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အယူဝါဒအိုအာဏာရှင်ဘုန်းကြီးတွေက.. .ခေတ်အမြင်ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို လွမ်းမိုးနေတာ… ဒါကြောင့် မပြုပြင်ချင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအဏာရှိနေသရွှေ့ တိုင်းပြည်မလွတ်လပ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ မြင်မိပါယ်…
မဂ္ဂင် ၈ ပါး ကောလိုက်လုပ်ပါသလား။အကုန်လုံးကိုလေ့လာနေတာ ခင်ဗျားတင်မဟုတ်ဘူး
post မတင်ဘူး။ခင်ဗျား ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ post ကိုရေးရတာလဲ????ရှင်းရှင်းပြောပါ။
ခင်ဗျားလေ့လာသူဆိုပြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်သွားပြန်ပေါ့။အဲဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့အရှက်မရှိဘူးကျုပ်ပြောတာ။တစ်ခုတော့ရှင်းချင်ပါတယ် (မပြုပြင်ချင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအဏာရှိနေသရွှေ့တိုင်းပြည်မလွတ်လပ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်…) အဲဒါမင်းဆိုလိုချက်လား????????
ရမှာလဲ ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါကွာ။သံဃာယနာတင်ပြီးတောင်ထိန်းလာတာမင်းကြမှပဲ ပြင်ချင်တယ်
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ post ကိုရေးရတာလဲ????ကိုပြန်ကြားရရင်တော့…တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်စေချင်လို့…လူတွေကို
ဘောင်ခတ်ထားမှု အမျိုးမျိုးကနေ လွတ်လပ်စေချင်လို့ပါဘဲ…
နောက်မိုးတိမ်မေးတဲ့ ပထမမေးခွန်းကိုလည်း ….ကြိုးစားပြီးဖြေကြည့်ပေးပါ့မယ်နော်..
ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပါယ်နဲ့များတူနေမလားလို့…အဲလိုမျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့..အမြင်ကျည်း .မြောင်းနေမလားပေါ့နော…
– နောက်တခုက…တိုင်းပြည်ကိုဘုန်းကြီးတွေက အုပ်စိုးနေလို့လား?…ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ
ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတုံးကလည်းသူတို့မပါပါဘူး…နောက်အခုလွတ်တော်မှာ လည်း သူတို့မပါပါဘူး… ဒါပေမဲ့ realman ပြောသလို..အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဇာတ်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အငွေ့အသက်ကမကင်းသေးဘူး….
လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် ဥပဒေတော့ ပြဋ္ဌာန်ထားပါရဲ့.. အစိုးရက ပြတ်ပြတ်သားသားမကိုင်တွယ်နိုင်သေးတာ ကိုကြည့်ရင်တော့ နောက်ကွယ်ကာလကာမှာ… အင်းအားသုံးပြီး… အဏာရှင်ဘုန်းကြီးတွေက.အစိုးရကို.ဖိအားပေးနေလို့ဘဲ…အစိုးရကော.. လိုအပ်ရင်နားထောင်မယ် ထင်နေလား? ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်…
လူဆိုတာ ကိုယ်ဘာကောင်လဲ?ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာလဲ? ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ?…What I am?…Where I am?..What I am to do? ဘုန်းကြီးဟာ ဘုန်းကြီးနေရာမှာ နေဖို့တော့လိုတယ်.. .အစိုးရတောင်မှ..အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတုန်းကလဲသူတို့မပါ.. .မဲဆန္ဒလည်းထဲ့ခွင့်မရ…. စသည့် အရာတွေကိုကြည့်ရင်…ကိုယ့်နေရာကို သိဖို့လိုနေပြီ…
…မိုးတိမ်ပြောသလို..”တိုင်းပြည်ကိုဘုန်းကြီးတွေက အုပ်စိုးနေလို့လား”…ဆိုတာ ဥပဒေအရ… သူတို့ ဘယ်နေရာမှာမှ မပါဘူး…အုပ်ချုပ်သူထဲမှာ လည်းသူတို့မပါတာ အသေချာဘဲ..ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့…ကိုယ့် အလုပ်ကို မလုပ်ကြတာလဲ?….
နောက်”ဘုရားမဖြေခဲ့တဲ့ အချက်တွေတောင်အကုန်မသိ”ဆိုတာပြောရရင် အဗျာကတ တရားဆယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်…
လူနှင့်စပ်လို့ လေးခွန်းမှတ်”…အဲဒါဘုရား မဖြေပါဘူး..စုစုပေါင်း(၁၀) ချက် ဘုရားမပြောသောစကား ဖြစ်ပါတယ်…
နောက်..မဂ္ဂင် (၈)ပါးကတော့ ….
အမြင်၊ အတွေး၊ အပြော၊အပြု၊ အနေ၊ ကြိုးစား၊ နိုးကြား၊စိတ်ထား ဖြစ်ပါတယ်…ကျေးဇူး မိုးတိမ်….
ဖတ်လို့တော့ကောင်းလာပြီ ၊ ကိုမိုးတိမ်ကိုမျှော်နေတာ ၊
ဟေ့လူ လျှာဖျားလေးနဲ့ လုပ်ဦးလေ ၊ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ စောင့်နေသဗျို့ ။
ဒါပေမဲ့ ပြီးရင် regeneration ဆိုပြီး ပေါ်ရင်ပြန်ပေါ်လာဦးမှာဗျ။
ချိုင်းနားက.. ၂၀၃၀မှာ.. အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်က.. တခုခုယူဖို့လုပ်နေတယ်.
ယူအက်စ်ကတော့… အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် တက်မွှေနေလေရဲ့..
ကျုပ်တို့ရွာထဲမတော့.. ကမ္ဘာကြီးလုံးတယ်…မလုံးဘူးကိစ္စ.. ပြောနေကြပါသတည်း…
This NASA image obtained in 2002 shows dust storms observed by the Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera. China is planning to collect …
Mars Curiosity Rover Detects Bright Object on the Red Planet
TIME-3 hours ago
This image from the right Mast Camera (Mastcam) of NASA’s Mars rover Curiosity showsascoop full of sand and dust lifted by the rover’s first …
ဘာသဘောလဲ သေသေချာချာသိချင်တာလေးပါ။ကိုယ့်ဘာသာ နေရင်
ကျွန်တော်ကလဲ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။သူကြီးကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ post တွေတင်တာကို လက်ခံထားတာ မှားတယ်လို့ပဲရှင်းရှင်းပြောပါရစေ။သူကြီးထုတ်တဲ့အမိန့် သူကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
သူကြီးကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ post တွေတင်တာကို လက်ခံထားတာ မှားတယ်လို့ပဲရှင်းရှင်းပြောပါရစေ။သူကြီးထုတ်တဲ့အမိန့် သူကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကျုပ်ကဘာအမိန့်ထုတ်ထားလို့လည်း.. ကိုရင်မိုးတိမ်ရာ.. :528:
အာဏာရှင်မုန်းပါတယ်ဆိုနေမှ… “အမိန့်”ဆိုတာကြီးနဲ့တော့ ကိုင်မပေါက်လိုက်ပါနဲ့..
အောင်မလေး.. “ဥပဒေကဲ့သို့..အာဏာတည်သောအမိန့်”တဲ့.. အဲဒီအသံကြိး..ကြားကြားမိပြီး.. ကျောချမ်းလို့..
ညာဖက်ဘေး အပေါ်နားလေးမှာ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာတဲ့.. စည်ကမ်းလေးတွေရှိတယ်..။
7. ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော စာများအား ပွိုင့်မပေးပါ။
အတွေးအခေါ်ကို.. ဆန့်ကျင်သဘောမတူရာမှာ.. အတွေးအခေါ်ကိုပဲ..ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရေးသားသင့်တာပေါ့..
ဘယ့်နှာ.. အတွေးအခေါ်..သဘောတရားရေးသူကို.. တိုက်ရိုက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွားပြော/ရေးနေသလဲ..
ရှင်းရှင်းပြောရရင်အခုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုငါထောက်ခံတယ်။အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာအတွက်လုပ်နေတာ ငါထောက်ခံသလိုတပြည်လုံးထောက်ခံတယ်။မင်းမယုံရင် poll result ကိုကြည့် OIC ကောင်တွေကိုလဲထောက်ခံပေးလိုက်ဦး။http://poll.pollcode.com/oy5v4t အဲဒီကိုသွားပြီး
မင်းက yes လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဦး။ငါကတော့ NO ပဲကွာ။မင်းမကြေနပ်နေတာကို ငါကြေနပ်တယ်။ရွှေဝါရောင်တုန်းကလို အခုဆန္ဒပြမှု့တွေမှာမဖြစ်နှိုင်ပါဘူး။မင်းကအဲဒီလိုဖြစ်စေချင်
ကျွန်တော်က..လူအများနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ လူမဟုတ်ဘူး……..အင်အားများတဲ့ အဖွဲ့အစည်း…ပြောတိုင်း မှန်တယ်လို မယူဆဘူး….သူတိုလည်းမှားနိုင်တယ်…ပြဿနာတခုကို အင်အားသုံးပြီးဖြေရှင်းရင်ငြိမ်းချမ်းမှု….အစစ်အမှန်ကို ဘယ်တော့မှရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ…
အခုခေတ် နိုင်ငံအကြီးအကဲရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနှစ်ဟာ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနှစ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာ…အဲဒါသမိုင်းမှာကျန်ခဲ့ပြီ….သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနှစ်ခေတ်က ဘုရင်မျက်နှာ တခုတည်းကိုဘဲကြည့်ပြီး အုပ်ချုပ်တဲ့ စနှစ်မျိုးဗျာ….အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးဟာ..စီးပွါးရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး အစစ…နောက်ကျစေတဲ့ ဆုပ်ကပ်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးဘဲဖြစ်တယ်…
အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးမျုိးက…ကိုယ့်သာသနာကို အရေးပေးထားခံရလို့…ကိုမိုးတိမ်တို့တော့ လွမ်းချင်လွမ်းနေမှာပေါ့…လွမ်းလည်း ဒီခေတ်မှာ မလာတော့ဘူး…
ခေတ်ပြောင်းတာကို မသိသလို…သူ့နောက်လိုက်တဲ့ လူတချို့လည်းရှိနေသေးတော့..ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေသေးတာပေါ့….ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အတိုင်းအတာ ကာလတခု အထိဘဲရတော့မှာ…မကြာတော့သော အချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါကြောင်းပါခင်ဗျာ…